W/Q. Cabdifataax Rashiid Maxamed
“Qisadan waxaan kala kulmay magaalada Ceel-gaal ee degmada Saylac, xilli aannu kormeeraynay macallimiin Wasaaradda Waxbarashadu tababaraysay.”
Magaceedu waa Ugaaso Daheeye Cumar. Qiyaas ahaan waa 50 jir, xoolo-dhaqato ah. Alaabo yaryar ayay magaalada ku iibisaa. Sidoo kale waa ardayad. Waxay dhigataa fasalka 8aad ee dugsiga hoose/dhexe ee tuulada Ceel-gaal. Waxay dhashay afar carruur ah oo saddex ka mid ahi reero iyo carruur leeyihiin. Carruurteedu waa laba wiil iyo laba hablood. Inanka ugu yari waa 20 jir, wuxuuna macallin ka yahay isla iskuulka ay hooyadii dhigato. Wuxu dhigaa Sayniska iyo Soomaaliga. Waxaa kaloo iskuulka dhigta laba carruur ah oo ay Ugaaso ayeeyo u tahay, kuwaas oo inanteedu dhashay. Labadan carruur ahi waxay kala yihiin wiil iyo gabadh waxaanay dhigtaan fasalka labaad iyo saddexaad. Taasi waxay ka dhigaysaa in Ardayad Ugaaso; inankeedii iyo carruurtii ay ayeeyada u ahaydba iskuulka Ceel-gaal wada joogaan.
Ugaaso mar ay ka hadlaysay sida ay waxbarashadu ugu hirgashay iyada oo waliba caruur yaryar galaasyada la dhiganaysay, waxay sheegtay in laba arrimood u sabab ahaayeen oo kala ah: iyada oo higisgeeda iyo himiladeedu ahaa inay aqoon yeelato ilaahayna la qabtay iyo macallimiinteeda oo marwalba garab taagnaa oo mararka qaarkood aan ula dhaqmi jirin sida ardayda kale. Waxaanay ku sii dartay “ illeen qof wayn ayaan ahay oo marba hawl ayaa igu soo kordhaysay; macallimiintuna way ii fududaynayeen oo sida caruurta iilamay xisaabtamayn. Waayo way igu adkaan lahayd inaan waxbarashada sii wato”. Waxay kaloo Ugaaso sheegtay inay xattaa dhigatay Quraanka iyo Carabigaba oo ay iyadu Naxwaha ugu sarraysay galaaskeedii, taas oo ku tusaysa sida ay uga go’an tahay inay waxbarato nafteedana horumar gaadhsiiso.
Ardayad Ugaaso inankeeda ugu yari waa Macallin Xamse oo sidaynu soo sheegnay isla iskuulkeeda wax ka dhiga, wuxuu ka baxay iskuulka ceel gaal ee hoose/dhexe. Waxaanu galay Dugsiga saree boodhanka ah ee GAB – waa iskuul uu dhisay Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya Dr Bayle, qurbojoog iyo aqoonyahan deegaanka ahina gacanta ku hayaan—kaas oo ay ardayda dagmooyinka Lughaya iyo Saylac iyo cid kasta oo danaynaysaaba dhigtaan. Macallin Xamse wuu sii wadi kari waayay waxbarashadiisii sare duruufo adag iyo xaalado gaara awgeed, waxaanu ku joojiyay fasalka 2aad ee Dugsiga sare. Waxaanu ku soo noqday Ceel-gaal halkaas oo uu Macallin ka noqday dugsigiisii, markii loo baahdayna maamulka iskuulku si mutadawacnimo ah macallin uga dhigay. Caruurta iskuulka la dhigata ayeeyo Ugaasona waxaa dhalay inanteeda u wayn oo deegaanka la dagan.
Hadduu Ilaahay ka dhigo; Ugaaso waxay sannad dugsiyeedkan 2017/2018 dhammaynaysaa Dugsigan ay dhigato. Laakiin qorshaheeda waxbarashadu halkaas kuma joogo. Waxay ku hammiyaysaa siday noo sheegtay inay macallimad ka noqoto isla dugsigan ay ka baxayso, Waxaanay tidhi “Waxaan ka codsanayaa dawladda iyo madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixi Cabdi in layga dhigo macallimad si aan hooyooyinka deegaankana waxbarashada ugu dhiirrigaliyo, carruurtana wax u baro”.
Ugu danbayntii; waxaan ku soo gunaanadayaa in Wasaaradda Waxbarashadu ay si dhow ula socoto xaaladda waxbarasho ee Ayeeyo Ugaaso intay Dugsiga dhammaynayso. Waxaan kaloo kula talinayaa Dawladda cusub in marka ay dugsiga dhammayso sannadka danbe insha allah, la shaqaalaysiiyo iyada iyo Macallin Xamseba. Sidoo kalena lagu daro liiska Macallimiinta sugayaasha ah, ee tababarka Macallimiinta la siinayo sannadaha soo socda. Waxaan hubaa inaynu bulsho ahaan iyo qaran ahaanba guulaysanayno, haddii aynu u dadaalno una dhabaradaygno sida Ardayad Ayeeyo Ugaaso. Wuxuu ilaahay JWC quraankiisa ku yidhi Aayad macnaheedu yahay “Miyay siman yihiin kuwa cilmiga leh iyo kuwa aan lahayn!”. Waa MAYA. Ilaahay ha barakeeyo Ayeeyo Ugaaso iyo reerkeedaba, hammigeedana haw rumeeyo.
QOF TASHADAY MA TAMARYARA!!!!!!!!!!.
Previous: “Qiyaamuhu Wuu Taagan Yahay Marka Talada Loo Dhiibo Cid..….” Sh.Adam-siiro
Next: Qodobada Lagu Xasuusan Doono Waxqabadka Xukumada Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo)